विदेशी बुढाको सुन र पैसा कुम्लो पारेर हिड्ने प्रमिला सुनार भेटिए। - Nepal Insider
January 15, 2020 1950
चितवन। श्रीमानले विदेशमा कमाएको सुन र पैसा बोकेर सम्पर्क विहिन भएकी चितवनका एक महिला अर्कै व्यक्तिसँग विहे गरेर गएको पाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिका १३ उज्वल नगरकी २८ वर्षीय प्रमिला सुनार एक महिना देखि सम्पर्क विहिन बनेकी थिइन।
प्रमिलाले आफु यस अघि भिडियो च्याटमा कुराकानी गर्ने केटासँग गएको खवर घर परिवारलाई यस अघिनै छाडेकी हुन। उनका नातेदारका अनुसार मंसिर २४ गते घरबाट हिडेपछि फोन गरेर आफु ती व्यक्तिसँग गएको र छोरा छोरीलाई हेर्दै गर्नु भनेर भनेको बताइएको छ।
उनले त्यसपछि १ पटक फोन गरेर सवैसँग रुँदै कुरा गरे पनि कहाँ र कोसँग गएको भन्नेबारे केहि खुलाउन सकेको थिएन। हाल निजलाई प’क्राउ गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा थप अनुसन्धान भैइरहेको छ। उनका श्रीमानका अनुसार प्रमिलाले नगद र सुन गरी करिव ७ लाख बराबरको सम्पत्ति लगेर गएको बताएका छन्।
Prevपहिरनलाई हेरेर मान्छेको चरित्र मूल्याङ्कन गर्छन्, मलाई अचम्म लाग्छ: रेखा थापा
Nextयस्ती भाईन तेरिया मगर, नेपाली फिल्म खेल्ने तयारी देखी प्रेम जीवन बारे यसो भन्छिन् तेरिया ? -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
थोत्रो साइकल चढ्ने हैसियत नभएकाले करोडको गाडीमा हिड्ने हैसियत कसरी बनाए ? ( भिडियो)
पश्चिमी वायु फेरि सक्रिए यस्तो डरलाग्दो बन्दैछ मौसम ३ दिनको मौसम अपडेट
सु’साइड नोट लेखेर यी गायिकाले गरिन् आ’त्मह’त्या ! ‘मेरा घरकालाई नछोड्नु’…..
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (38210)